Morris West. Chirangaridzo cherufu rwake. Mamwe emabasa ake | Zvazvino Zvinyorwa
Morris kumadokero ndomumwe wevanyori vanozivikanwa veAustralia. Nhasi zvazadzikiswa Makore makumi matatu nemana mushure mekufa kwake. Uye mudzimba dzevakawanda vedu vatove zera pano pachange paine rimwe remabhuku ake mune iwo edhisheni yepakati pezana ramakumi maviri emakore. Inonyanya kuzivikanwa nemazita akadai Shangu dzemubati wehove, West yakaburitsa mamwe akawanda mabhuku kupfuura akaitwawo versions zve cinema. Izvi ndizvo vamwe izvo zvandinodzokorora mundangariro yake.
1 Morris kumadokero
2 5 emabasa ake
2.1 Shangu dzemubati wehove
2.2 Shongwe yeBhabheri
2.3 Zhizha reRed Wolf
2.4 Gweta redhiyabhorosi
Akazvarwa muna 1916 muna St Kilda, akadzidza kumayunivhesiti e Melbourne neHobart. Zvakaitika zvakare Makore gumi nemaviri mumonastery, asi handina kuwana mhiko uye akasungirira tsika usati waapfeka. Akaita shanduko huru muhupenyu hwake apo vakapinda muchiuto cheArmed Intelligence Service. Uye gare gare akashanda mu redhiyo. Pakati-ma50 akafunga kuzvipira iye ega kunyora.
Waive muVatican uye ndakagara munyika dzinoverengeka muEurope neUnited States. Nhoroondo dzake ndedze nhoroondo yemhando nedingindira dzinosiyana pakati pechechi nezvematongerwo enyika uye zvakatemwa zvakanyanya kana zvishoma zverudo. Navo akawana mibairo yakati wandei uye mamwe ari echinyakare kubva muzana ramakore rechiXNUMX.
5 emabasa ake
Shangu dzemubati wehove
Ndiyo zita rekutanga Zve kufona Tetralogy yeVatican uye zita rayo rakakurumbira, kunyanya nekuda kweiyo firimu vhezheni of 1968 ane nyeredzi Anthony quinn. Anotaura nyaya yeiyo sarudzo sepapa weCirilo Lakota, weSlavic mavambo uye musungwa wemagulags, pakati pehondo inotonhora. Ndiani aimbova muurayi wake iye zvino ave mutungamiriri we Soviet Union. Uye vese vachatarisana nechinogoneka nzara ichiuya pamusoro pevanhu veRussia, ndiani anogona kuunza iyo kupinda kubva kunyika dzakavakidzana.
Iyo tetralogy inopedzwa ne Jesters dzamwari, Razaro y Kukudzwa.
Panyaya yezvematongerwo enyika isina kumira kuve yazvino, anotiudza nyaya ye a Mumiriri weIsrael muchivande, UN musoro wekupokana, UN Kazhinji yeDhamasiko, a mubhengi Lebanese uye a Pendi wechiJuda. Hupenyu hwavo uye zvavanofarira zvinosanganiswa pakati pe kunetsana pakati peArabhu nemaJuda.
Zhizha reRed Wolf
Kuchinja rejista iyi inoveli na mashiripiti, chakavanzika uye echinyakare masimba set mu Hebrides zviwi, kuScotland, uko kunoratidzika kunge nyika inoguma.
Ivo protagonists ndivo varume vaviri nevakadzi vaviri mune iri pekutanga nyaya yakapusa yerudo, kukwikwidzana, hukama uye mhirizhonga. Asi kune zvakare kuri pasi pekuedza kwemurume wemazuva ano kuita tiza kubva kubudiriro.
Zvekare tora iyo nzira yechitendero kubva pamhedzisiro isingagumi yechiKristu iyo gakava rinogara riripo pakati pekutenda nekushaya simba kwevanhu. West anotaurira maitiro ake protagonist, Meredith, achafa asi akasarudzwa se Gweta raDhiyabhorosi kuita semuchuchisi kumurume wavanoda kurova. Asi izvi, Giaccomo NeroneAinge asina kukomborerwa kudaro, akange asiya mukadzi akazvitakura waasina kuroora naye uye anga aitawo vavengi.
Meredith, asati afa, anokumbira chishamiso uye vaviri, Nina naPaolo Sanduzzi, vanomupa. Mukuwedzera, iye, oga, anokwanisa kugadzira imwe. Zvese zvakaputirwa nerugwaro zvinokatyamadza uye zvine hungwaru kubva kunovhenekerwa novel.
Uye pakupedzisira rimwe zita rine kubata kworudo. mike mccreary, protagonist, ari irish mushingi aishanda mu oiri tsime rekuchera wavanoda kuendesa kuIndonesia. Asi Rubensohn, UN anofungidzira asina mufungo, inopa basa rausingagone kuramba. Dambudziko rinouya when Lisette, iye anoda uye shamwari yaRubensohn waasingachade, inodanana naMcCreary.
Ivo vaviri vanofanirwa kurarama iro rudo vachiba. Asi ipapo Rubensohn anoda kutengesa Lisette kuna mambo weKarang Sharo mukutsinhana nemvumo yemafuta pachitsuwa chake chegomo. Saka McCreary ndichatora ronga kutsiva naRubensohn uye kununura kuna Lisette.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Morris West. Chirangaridzo cherufu rwake. Mamwe emabasa ake
Kuvhura Liber 2019. NaBeatriz Osés naiye Erik Vogler